कोभिड-१९ लाई टाढा राख्न सफाइ तथा स्वच्छता ! - NepalKhoj
नेपालखोज २०७८ माघ ७ गते ११:५३
के खानाबाट कोरोना भाइरस लाग्न सक्दछ ? अब कसरी लुगा धुने ? सांसारिक घरेलु कार्यहरू अनिश्चितता र चिन्ताको स्रोतमा परिणत भएका छन् किनकि परिवारहरूले आफना प्रियजनलाई सुरक्षित र स्वस्थ्य राख्दै आधारभूत कामहरू थाम्दै आएका छन् । भाइरसबारे व्याप्त गलत सूचनाले सबैलाई जोखिममा पार्छ र कल्पनाशील कुराबाट तथ्यलाई छुट्याउने तनावलाई समेत थप गर्छ ।
कोभिड-१९ को भाइरसको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको समयमा, हामीलाई यो भाइरस व्यक्तिको श्वासप्रश्वासको छिटासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कको माध्यमबाट (खोकी र हाँच्छ्युमार्फत) र भाइरसले दूषित गरेको सतहहरूबाट संक्रमण हुन्छ भनेर थाहा छ । यो भाइरस विभिन्न सतहमा सतहअनुसार केही घण्टादेखि केही दिनसम्म बाँच्न सक्छ। राम्रो खबर के छ भने यसलाई साधारण किटाणुनाशकले मार्न सक्छ । अब यसको अर्थ घरका लागि के हो त ?
अभिभावकहरूलाई सहयोगी हात दिनका लागि, हामीले कोभिड १९ को बारेमा थाहा भएको विशेषज्ञ जानकारी र घरबाट पर राख्नका लागि सुझावहरू संकलित गरेका छौं ।
साधारण स्वच्छताका उपायहरूले परिवारको र अन्य सबैको स्वास्थ्यलाई बचाउन मद्दत गर्दछ ।
आफ्नो अनुहार नछुने
आफ्नो आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिने ।
आफ्नो हातमा खोकी र हाँच्छ्यु नगर्ने
खोकी वा हाँच्छ्यु गर्दा आफनो नाक र मुख नरम कागज वा कुहिनोले छोप्ने ।
प्रयोग गरिएको कागजलाई तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा फाल्ने ।
दुरी कायम गर्ने
खोकी वा हाँच्छ्यु गरिरहेको व्यक्तिबाट कम्तीमा १ मिटर (३ फिट) को दुरी कायम गर्ने ।
आफ्नो हात धुने, धुने अनि धुने
हो, तपाईंले यो जताततै सुन्दै हुनुहुन्छ किनकि यो रक्षाको सबैभन्दा राम्रो पंक्ति हो। कम्तीमा २० देखि ३० सेकेण्डसम्म साबुन पानीले बारम्बार हात धुने ।
के तपाईंलाई थाहा छ ? जबसम्म तपाईंले साबुन प्रयोग गरि आफ्ना हातहरू सही तरिकाले धुनुहुन्छ, चिसो पानी र तातो पानी जीवाणु र भाइरसहरू मार्न समान रुपले प्रभावकारी हुन्छन्।
घर वरपरको सफाइ
तपाईंको घरमा संक्रमणको जोखिम कम गर्न नियमित रुपमा बारम्बारमा छोइने सतहहरू सफा गर्नु र किटाणरहित बनाउनु एक महत्त्वपूर्ण सावधानी हो ।
उत्पादन प्रयोग गर्दा पन्जा लगाउने र हावाको राम्रो आवतजावत भएको सुनिश्चित गर्ने जस्ता सावधानीहरूसहित सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि सफाइ उत्पादन निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् ।
सफा गर्नुपर्ने र किटाणुरहित बनाउनुपर्ने बारम्बार छोइने सतहहरू
हरेक घर फरक हुन्छन् तर ढोकाको ह्यान्डलहरू, टेबलहरू, कुर्सीहरू, रेलिङ, भान्सा र शौचालयको सतहहरू, धारा, बत्तीको स्विचहरू, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, टयाम्बलेट, किबोर्ड, रिमोट कन्ट्रोल, खेल नियन्त्रक तथा मनपर्ने खेलौनाहरू जस्ता सतहहरू सामान्यत: उच्च स्पर्स सतहहरूमा समावेश हुन्छन् ।
सफा र किटाणुरहित बनाउन के प्रयोग गर्ने
यदि सतह फोहोर छ भने, पहिले त्यसलाई साबुन वा डिटरजेन्ट र पानीले सफा गर्नुहोस् । त्यसपछि अल्कोहल (करिब ७० प्रतिशत) भएको किटाणुनाशक उत्पादन वा ब्लिच प्रयोग गर्नुहोस् । भिनेगार तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुहरू सिफारिस गरिँदैन ।
धेरै ठाउँहरूमा किटाणुनाशक स्प्रे र पुछ्ने कागज भेट्टाउन गाह्रो हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा, निरन्तर साबुन र पानीले सफा गर्नुहोस् । घरेलु ब्लिचलाई केही हदसम्म पातलो बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कसरी किटाणुरहित गर्ने
तपाईंले सफा गर्न प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू सतहमा प्रयोग गरिसकेपछि तुरुन्तै सफा गर्नु महत्त्वपूर्ण छैन । धेरै किटाणुनाशक उत्पादनहरू जस्तै पुछ्ने कागज स्प्रेहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केही मिनेटसम्म सतहमै राख्नुपर्छ । तपाईंहरूले मोबाइल फोन तथा अन्य विद्युतीय उत्पादनजस्ता संवेदनशील वस्तुहरूलाई हानि हुनबाट जोगाउन सिफारिस गरिएअनुसारका निर्देशनहरू पढेर प्रयोग गर्नुहोस् । विद्युतीय उपकरणहरूका लागि पुछ्ने कपडा प्रयोग गर्नुहोस् ।
कोभिड १९ भाइरस कपडामा कतिन्जेल बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अस्पष्ट छ, तर धैरै कपडाका वस्तुहरूमा प्लास्टिक र धातु तत्त्वहरू छन् जसमा यो केही घण्टादेखि धेरै दिनसम्म बाच्न सक्छ । सावधानी र सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस् । घरभित्र प्रवेश गर्दा जुत्ता फुकाल्ने, भिडभाडमा गएर आएपश्चात सफा लुगा लगाउने र साबुनपानीले तुरुन्तै हात धुने जस्ता राम्रो अभ्यासहरू विचार गर्नुहोस् ।
घरमा लुगा धुने
तन्ना, रुमाल तथा लुगाहरू नियमित रुपमा सफा गर्ने ।
-हावाबाट भाइरस फैलाउने सम्भावनालाई कम गर्न फोहोर लुगालाई नहल्लाउने ।
-उपयुक्त तातो पानी मिलाएर र सुक्खा वस्तु छुट्टै राखेर लुगालाई साबुन वा डिटर्जेन्टले धुनुहोस् । यी दुवै तरिकाले भाइरसलाई नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ ।
-हात साबुन र पानीले धुनुहोस् वा तुरुन्तै अल्कोहल भएको ह्याण्ड रब प्रयोग गर्नुहोस् ।
-धुने लुगा हाल्ने झोला र टोकरीलाई सफा वा किटाणुरहित बनाउनुहोस् । डिस्पोजेबल झोलामा धुने लुगा संकलन गर्नेबारे सोच्नुहोस् ।
घरबाहिर लुगा धुने
यदि तपाईंको घरबाहिर रहेका लुगाधुने स्थानहरूको उपयोग गर्न आवश्यक छ भने, समझदारीका साथ सावधानी अपनाउनुहोस् :
-बाहिर बिताउने समय कम गर्न घर छोड्नुअगाडि धुने लुगा तयार गर्ने ।
-मानिसहरू कम हुने समयमा जाने प्रयास गर्ने ।
-अन्य व्यक्तिहरूसँग शारीरिक दूरी कायम गर्ने ।
-सम्भव भए, डिस्पोजेबल पन्जाको प्रयोग गर्ने, आफूले प्रयोग गर्ने सबै उपकरणहरूको सतहलाई किटाणुरहित बनाउने र आफ्नो अनुहार नछुने ।
-भित्र लुगा धुने सुविधा प्रयोग गर्दा, सक्नुहुन्छ भने, लुगा धुन नसकिएसम्म बाहिर नै प्रतीक्षा गर्ने ।
-लुगा घरमै पट्याउने ।
-तपाईंको हात साबुन र पानीले धुने वा तुरुन्तै अल्कोहल भएको ह्यान्ड रब प्रयोग गर्ने ।
-धुने लुगा हाल्ने झोला र टोकरीलाई सफा वा किटाणुरहित बनाउने ।
-डिस्पोजेबल झोलामा धुने लुगा संकलन गर्ने ।
यदि तपाईंको लुगा धुने सुविधाहरूमा पहुँच छैन भने, आफ्नो कपडा घरमा साबुन वा डिटरजेन्ट सक्दो तातो पानीले धुनुहोस् ।
हालसम्म कोभिड-१९ भाइरस खाना वा खानाको प्याकिङबाट व्यक्तिमा संक्रमण हुन्छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन, तर भाइरसले दूषित पारेको सतह वा वस्तु छोएर त्यसपछि अनुहार छोएमा व्यक्तिलाई संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । अन्य व्यक्तिहरूसँग बाहिरी खाना किन्दा वा खाना डेलिभरी लिँदा (स्थानीय संक्रमण भएको क्षेत्रबाट डेलिभरी प्राप्त गर्दा) हुने नजिकको सम्पर्कबाट ठूलो खतरा उत्पन्न हुन्छ । सधैं जस्तो, कुनै पनि खानाबाट हुन सक्ने रोगहरूबाट बच्न खानालाई समाउने क्रममा राम्रो स्वच्छता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
खाना प्याकिङ र समाउने सावधानी
-कुनै पनि अनावश्यक प्याकेजिङ हटाउने र बिर्को भएको फोहोरको भाँडामा हाल्ने ।
-खानालाई प्याकेजिङबाट निकालेर, सफा प्लेटमा राखेर, प्याकेजिङलाई फाल्ने ।
-क्यानजस्ता प्याकेजिङहरू खोल्नु वा भण्डारण गर्नुअगाडि किटाणुनाशकले सफा गर्ने ।
-प्याकेजिङ नगरिएका उत्पादनहरू जस्तै फल र तरकारीहरूलाई राम्रोसँग धाराको पानीमा धुने ।
-हात साबुन र पानीले धुने वा तुरुन्तै अल्कोहल भएको ह्यान्ड रब प्रयोग गर्ने
खानाको स्वच्छताका लागि
-कुनै पनि खाना तयार गर्नुअघि कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले राम्ररी हात धुने ।
-नपकाएको माछा र मासु काट्नका लागि अलग काट्ने बोर्डको प्रयोग गर्ने ।
-सिफारिस गरिएको तापक्रममा खाना पकाउने ।
-सम्भव भएसम्म, नाश हुन सक्ने वस्तुलाई रेफ्रिजिरेटर वा फ्रिजरमा राख्ने र वस्तुको उत्पादनको समाप्ति मितिलाई ध्यान दिने ।
-खानाको फोहोर र प्याकेजिङलाई कीराहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्ने गरी उचित तथा स्वच्छताको हिसाबले फेरि प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने वा नष्ट गर्ने ।
-खाना खानुअगाडि कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म साबुन र पानीले राम्ररी हात धुने र बालबालिकाहरूले पनि त्यही गरेको निश्चित गर्ने ।
-सँधै सफा भाँडा र प्लेटहरूको प्रयोग गर्ने ।